Shape Refractory ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Shape Refractory Factory
Alumina ပူဖောင်းအုတ်သည်အပူချိန်မြင့်မားသောအပူစွမ်းအင်ချွေတာနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် alumina hollow spheres များကိုအဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၁၇၅၀ temperature တွင်မြင့်မားသောအပူချိန်မီးဖိုထဲတွင် alumina ဆွန်းနယ်ပယ်များမီးလောင်ရန်အခြား binders များနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ Alumina ပူဖောင်းအုတ်သည်အပူစီးကူးနိမ့်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောအပူထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖိအားမြင့်မားခြင်းနှင့် ၁၈၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ရှိအပူချိန်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူခံနိုင်ရည်နှင့်အပူပေးမှုနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းတို့ရှိသည်။
insulator တွင်လည်း Firebrick
Alumina ပူဖောင်းအုတ်သည်အပူချိန်မြင့်မားသောအပူစွမ်းအင်ချွေတာနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် alumina hollow spheres များကိုအဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၁၇၅၀ တွင်မြင့်မားသောအပူချိန်မီးဖို၌ alumina hollow spheres များကိုမီးထွန်းရန်အခြား binders များနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။℃။ Aluminaပူဖောင်းအုတ်သည်အပူစီးကူးနိမ့်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောအပူထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖိအားမြင့်မားခြင်းနှင့် ၁၈၀၀ အောက်ရှိအပူချိန်များတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။°C. ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူခုခံမှုနှင့်အပူကာကွယ်နိုင်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းအင်ချွေတာခြင်းတို့ရှိသည်.
Zircon nozzle သည်အပူချိန်မြင့်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ သံမဏိစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည့်ဖြစ်စဉ်ကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ zirconium အရွယ်အစား nozzle သည်ကောင်းမွန်သော shock နှင့် heat resistance ရှိပြီးအလွန်တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားပြီးအချို့သော anti-corrosion function သည်။ zirconium အရွယ်အစား nozzle သည်အရည်ပျော်သောသံမဏိစီးဆင်းမှု၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေပြီးပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်သည်။
zirconium အရွယ်အစား nozzle သည်လုပ်ငန်းစဉ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းကိုမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားမြင့်များဖြင့်ထုတ်လုပ်သောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏ပုံမှန်တိုးတက်မှုကိုသေချာစေရုံသာမကထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။
ထို့အပြင်အကာအကွယ်လက်ဟုလည်းလူသိများသော Ladle shroud ကိုအဓိကအားဖြင့် ladle နှင့် tundish ကြားတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဘောင်းဘီနှင့်အညစ်အကြေးကြားဆက်သွယ်မှု၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အထက်ချိတ်ဆက်သောကလေး၏အောက်ပိုင်းသည်လျှောစွန်သောကိရိယာ၏ရေထွက်ပေါက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးအနိမ့်အဆုံးသည်ယိုယွင်းသွားသည်။ ၎င်းသည်အရည်သွပ်သောသံမဏိသည်သူငယ် မှနေ၍ ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖြိုခွဲခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ သွန်းလုပ်သောသံမဏိ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးသတ္တုစပ်ကိုသံမဏိ၏အလယ်အလတ်ဓာတ်တိုးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ nozzle ၏အတွင်းပိုင်းနံရံပေါ်ရှိသံမဏိတွင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုလျော့ကျစေပြီးလုပ်ငန်းသက်တမ်းကိုတိုးစေသည်။
Tundish stopper သည်အိုးထည်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအိုးအိမ်စွန့်ခွာခြင်းဖြင့် nozzle ၏အဖွင့်နှင့်ပိတ်ခြင်းနှင့်အရည်ပျော်သောသံမဏိစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်သံမဏိပုံးထဲတွင်တပ်ဆင်ထားသောဆန့်ကျင်ဘက်လှံတံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လှံတံ၊ လက်အုတ်နှင့် plug အုတ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ လှိုင်းအားကိုအများအားဖြင့် ၃၀-၆၀ မီလီမီတာရှိသောရိုးရှင်းသောကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အပေါ်ဆုံးအဆုံးအားဖြင့်မြှင့်တင်ရေးယန္တရား၏လက်မောင်းနှင့်သော့ခလောက်များဖြင့်ချိတ်ထားသည်။ အနိမ့်အဆုံးကို plug သို့မဟုတ်အုတ်ကြိုးများဖြင့်ချိတ်ထားသည်။ အလယ်လက်အုတ်အုတ်တို့ဖြင့်ချိတ်ထားသည်။ Tundish အဆို့ကို ထပ်မံ၍ မုန့်ဖုတ်ပြီးနောက်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်တွင်ဂရုတစိုက်တည်ဆောက်ရမည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မတော်တဆမှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ ၄၈ နာရီကျော်။
အသုံးပြုသောအခါအရှိန်အဆို့လှံတံကို tundish အတွက် installed ဖြစ်ပါတယ်။ မှိုထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောသံမဏိစီးဆင်းမှုနှုန်းကိုအဆို့ခေါင်း၏အနေအထားကို tundish nozzle ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် argon သည်ပိတ်ထားသောအပေါက်မှတစ်ဆင့် tundish သို့လွင့်ထွက်သွားနိုင်သည်။
porous Plug နှင့် Seat Well Block
ထိုင်ခုံကောင်းစွာပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို corundum, chrome corundum နှင့် corundum spinel တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအပူစွမ်းအား၊ အပူတည်ငြိမ်မှု၊ အခွံခုခံမှုနှင့်လေအောက်ခံခံနိုင်ရည်ရှိသည့်သီးခြားနှင့်အပြည့်အ ၀ ရှင်သန်နိုင်သောအုတ်များပါ ၀ င်သည့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ အသက်ရှူနိုင်သောအုတ်သည်သက်တောင့်သက်သာရှိသော core အုတ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အောက်ခြေမှုတ်ထားသောအာဂွန်လုပ်ဆောင်မှုကိုချောချောမွေ့မွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်အဓိကပံ့ပိုးသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
porous plug သည်သက်တမ်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်းတို့ဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအပူတည်ငြိမ်မှု၊ တိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ တိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ဖောက်ဖျက်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောမှုတ်နှုန်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုနှင့်သက်တမ်းကြာရှည်သောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။